Maria vazquez | 01/06/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/05/2021 22:53 | Salads uye miriwo
ari Yotam Ottolenghi mabhuku ekubika ndidzo dzandinofarira kana zvasvika pakutsvaga kurudziro. Pane nguva shoma dzandinoteedzera mabikirwo avo kune iyo tsamba, asi kazhinji ndinozvigadzirisa kuti dzigadzire shanduro dzakareruka kana kungoenderana neangu mapantry. Iri keke rekoliflower ndiwo mumwe muenzaniso wakadai.
El Cake Koliflower inopinda nemumaziso. Iyo keke yakapusa kugadzira uye yakakwana kushandira zvese kwemasikati uye kwemanheru, ichiperekedzwa ne green saladi. Iwe unogona zvakare kuzvigadzirira pamberi uye wozviratidza zvinodziya kana kutonhora kune zvaunofarira!
Iyo bhuku vhezheni inopeta zvakapetwa zviyero zvandakashandisa, yakakwana kune 15-inch pani uye mana ane rupo servings. Uye zvakare, iyo yekubheka yekutanga inosanganisa zvimwe zvinongedzo zvandakatsiva zvevamwe kana kubvisa. Zvakadaro mhedzisiro iri gumi. Edza izvo!
1 Zvisungo (zveiyo 15 cm mold)
Zvisungo (zveiyo 15 cm mold)
2 mashupuni epuniki akawedzera mhandara mafuta omuorivhi
1/2 teaspoon rosemary, yakasarudzwa
3 mazai makuru
60 g. hupfu hwegorosi
1/2 teaspoon yehupfu yekubheka
75 g ye grated Parmesan chizi
Ruomba kuzora muforoma
2 tablespoons chena sesame mhodzi
Preheat oven kusvika 180ºC, nekupisa kumusoro uye pasi.
Geza cauliflower uye uzvitsaure muzvikamu. Isa pani panemvura uye munyu munyu kuti upise uye, painobika, bika iyo kolifulawa kwemaminitsi gumi nemashanu. Wobva wasiya pane strainer kuti ubudise mvura yese uye nekuoma.
Ipo cauliflower ichibika cheka mhete ina dzeeiii kushongedza keke uye kutsemura zvasara kuita zvidimbu zvidiki, kuti zvionekwe pakeke.
Pisa mafuta omuorivhi mu skillet pamusoro pepakati moto uye sanganisira hanyanisi kwemaminitsi gumi. Wobva wawedzera rosemary, bika mamwe maviri maminetsi uye rega ichipise kupisa.
Kunyange ichidziya, sanganisa yakaoma midziyo mundiro. upfu, turmeric, mbiriso yehumambo, munyu uye mhiripiri.
Pashure rova mazai mundiro. Kana uchinge warohwa, wedzera hanyanisi, yakaoma zvigadzirwa, uye chizi uye sanganisa zvakanaka.
Pakupedzisira, Wedzera zvidimbu zveholiflower.
Gadzirira chiumbwa chinobviswa che15cm. Rongedza chigadziko chayo nemapepa echinyorwa uye girisa madziro nehotela. Ipapo kusasa mbeu dzesame pamwe nemadziro eforoma.
Dururirai musanganiswa muforoma ikozvino zvagadzirira uye nekushongedza pamwe neakachengeterwa eiii mhete.
Tora kuchoto uye bika kwemaminitsi makumi matatu nemashanu kana kusvika seti. Wobva waibvisa muchoto, rega izorore kwemaminitsi mashanu uye isina kuumbiwa.
Shumira keke yekolifulawa nesadhi uye unakirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Salads uye miriwo » Cake Koliflower
Zvikanganiso zvekushongedza zvatinowanzoita